Bella | Be A Star
Special For Star
To be the Leading National Brand to provide women with Beauty Solutions for empowerment.
To be the Fast Cosmetics Brand launching the latest innovative beauty trends at affordable prices with good quality to add star power to any woman’s life.
0 0.00 Ks
Bella သုံးနှစ်ပြည့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့
Bella Perfume ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့ ၊ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ၊ Rose Wood ဟိုတယ်တွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပွဲကို နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များဖြစ်ကြသည့် စိုးမြတ်သူဇာ ၊အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ခိုင်သင်းကြည် ၊မိုးဟေကိုနှင့် ဖွေးဖွေး တို့မှ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါပွဲမှာ Bella တည်ထောင်သူ ဒေါ်ဝေသစ်လွင်မှ မြန်မာမိန်းကလေးများအတွက် သက်သာသော‌ဈေးနှုန်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲစေချင်‌သော Bella Cosmetic တည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နှုတ်ခွန်းဆက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
3rd Birthday of Bella Super Star Lipsticks မြန်မာမိန်းကလေးများအတွက် သက်သာသော‌ဈေးနှုန်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲစေချင်‌သော Bella ၏ (3) နှစ်ပြည့် Birthday Party နှင့် ၃ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အထူးအဖြစ် အသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်လိုက်သော Lipstick ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Super Star Lipstick ကို အရောင် (၅) မျိုုးအား မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ပွဲအခမ်းအနား ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုမိတ်ဆက်သော Super Star Lipstick မှာ လွန်ခဲ့သော3နှစ်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Star Lipstick နှင့် ဈေးနှုန်းတူရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး Vitamin E ကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် စိုပြည်ဖူးကြွပြီး ရေဓာတ်အပြည့်ပါဝင်တဲ့ Cream Matte နှုတ်ခမ်းနီ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Super Star ရဲ့ အရောင်ဟာ ကိုယ့်အရောင်ဖြစ်ပြီး အကြိုက်ဆုံး အရောင်တွေကို ဘူး Packaging ဘူးပုံစံအသစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
မိုးဟေကို အချစ်ဆုံး #Coco A True Nude – နေတိုင်းဆိုးလို့လှတဲ့ အညိုရောင် ဖွေးရဲ့ နှင်းဆီ #Rose True Red – အရမ်းလှတဲ့ အနီတောက်တောက် အူဝဲရဲ့ အချိုဆုံး #Candy FushiaPink- ပန်း ရာင်ရဲရဲ မခိုင်လေး အချစ်ဆုံး #Love Daily must have- ပန်းအသားလေး စိုးကို စိုးမိုးတဲ့ #Grace က အရမ်းကျက်သရေရှိတဲ့ Pink ဆိုင်တွေမှာလဲ 2,995 ကျပ်ဖြင့် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်သလို online ကမှာချင်ပါက ၄ ချောင်းဝယ်ယူလျှင် Delivery Free charge ဖြင့် မြန်မာတနိုင်ငံ လုံးသို့ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
3rd Birthday Cake Bella တည်ထောင်သူ ဒေါ်ဝေသစ်လွင်မှ ဧည့်သည်တော်များနှင့်3နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကိတ်မုန့်ကို အတူခွဲပြီး ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များအတွက် မိမိ နာမည် ရေးထိုးထားသော Super Star Lipstick များကိုလည်း လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျောင်း (၃) ကျောင်း လှုဒါန်းခြင်း 3rd Birthday အထိမ်းအမှတ်အဖြင့် Bella မှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကျောင်း ၃ ကျောင်းကိုလဲ လှုဒါန်းပေးမည်ဖြစ်တယ်လို့ လည်းထပ်မံ သိရပါတယ်။
Always Building Confidence through Beauty
No 11, 6th Street, Ward No.8 , South Okkalapa Industrial Zone, South Okkalapa Township, Yangon.
Telephone: (+95) 01 934 5533
© Copyright 2022 by Bella Be A Star.